Katsaka - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Katsaka (zavamaniry))
Ny katsaka dia zavamaniry volena mba hahazoana voany (mitambatra ho babiny) izay atao sakafon’ ny olombelona sy ny biby fiompy, sy mba hahazoana ny raviny sy ny tahony hohahin’ ny biby fiompy. Isan’ ny zavamaniry be mpamboly maneran-tany, toy ny vary sy ny varimbazaha, ny katsaka. Ny anarana siantifikan’ ny katsaka famboly dia Zea mays, fa ny katsaka dia kosa, izay hita tao Meksika kosa dia atao hoe Zea diploperennis.
Ny katsaka dia bozaka zavamaniry amin' ny fianankavian' ny Poaceae. Sokajiana ho isan' ny voa maina ny katsaka. Maniry amin' ny faritra maro eran' izao tontolo izao.
4 Fambolena katsaka
5 Aretina sy bibikely mpanimba ny katsaka
6 Famokarana sy fampiasana ny katsaka
Toetoetrany[hanova | hanova ny fango]
Zavamaniry tsy mandavan-taona fa volena isan-taona ny katsaka. Mijoro mahitsy ny tahony. Miovaova ny haavony, ka misy ny zeny izay mirefy 60 sm rehefa lehibe, nefa misy ny lava dia lava izay mety mihoatra 600 sm. Ny salan-kalavan’ ny katsaka dia mirefy 250 sm. Lava ny raviny. Tsy mikambana ny lahimbony sy ny vavimbonin’ ny katsaka fa entin’ ny foto-katsaka samy hafa.
Eny amin’ ny tendron’ ny tahoben’ ny katsaka no ipoiran’ ny tamba-boniny izay fitambarana vony maro mitondra ny tsirinaina lahy. Ny tamba-bony vavy kosa (ilay ho lasa babin-katsaka), dia tokana sady mety ahitana hatramin’ ny voany arivo any ho any. Ny babin-katsaka dia voafono anaty ravina. Misy tsiraka toy ny volo (volon-katsaka) mivoaka avy amin’ ny tsirinaina vavy ka mipoitra amin’ ny tendron’ ny babin-katsaka. Ny vovo-bonin’ ny katsaka miparitaka avy amin’ ny lahimbony dia entin-drivotra hatreny amin’ ny volon-katsaka amin’ ny vavimbony, ka eo izy no mitsimoka sady midina ao anaty volon-katsaka hatrany amin’ ny tsirinaina vavy. Ny tsirinaina vavy mitsimoka rehetra dia mivoatra ka lasa voan-katsaka.
Fiaviany[hanova | hanova ny fango]
Heverin’ ny mpikaroka ho avy any Amerika Afovoany sy Atsimo ny katsaka, izay foto-tsakafon’ ny mponina tao amin’ ireo faritra ireo nandritra ny taonjato maro talohan’ ny fahatongavan’ ny Eorôpeana. Efa nisy tany amin’ ny faritra atsimo-andrefan’ i Etazonia tany amin’ ny 3 000 taona lasa any ho any ny katsaka famboly farafaha-tarany. Naniry tany amin’ ny lohasahan’ i Tehuacán kosa ny katsaka dia, ao amin’ ny faritra atsimon’ i Meksika tany amin’ ny taona 7 000 any ho any, nefa ny fikarohana taty aoriana dia namaritra ny fisehoan’ ny katsaka tao amin’ io faritra io ho tamin’ ny 4 600 taona any ho any. Tsy misy fiavahany firy loatra amin’ ny katsaka famboly ny katsaka dia.
Karazan-katsaka[hanova | hanova ny fango]
Maro karazana ny katsaka famboly, ka samy maneho toetra mampiavaka azy ny karazana tsirairay. Ny sasany dia efa azo otazana ao anatin’ ny roa volana, ny hafa hatrany amin’ ny iraika ambin’ny folo volana vao azo otazana. Miova arakaraka ny karazana koa ny lokon’ny ravin-katsaka, ka miova eo anelanelan’ ny maitso tanora sy ny maitso antitra izany ary mety hisy faritra miloko mena na volomparasy. Ny halavan’ ny babin’ ny katsaka dia eo anelanelan’ ny 7,5 sm sy mihoatra ny 50 sm. Ny isan’ ny andalam-boany dia eo anelanelan’ ny valo sy telompolo enina amby na mihoatra.
Fambolena katsaka[hanova | hanova ny fango]
Niteraka fandrosoana lehibe teo amin’ ny fambolena katsaka ny fampiasana ny masomboly nohatsaraina (tamin’ ny alalan’ny fampivadiana karazan-katsaka samy hafa) tamin’ny taona 1933. Izany karazan-katsaka an’ arivony no novokarin’ ny mpikaroka momba ny zavamaniry mba hampitomboana ny vokatra amin’ ny faritra maro eto amin’ izao tontolo izao. Nampitombo ny vokatra 25 % hatramin’ ny 50 % ny fampiasana masomboly vokatry ny fampivadina ny karazan-katsaka sasany. Mitahiry gliosida betsaka ny katsaka nefa kely sady tsy tena tsara ny prôteinina ao aminy. Raha ny katsaka no atao sakafo fototra dia tsy maintsy ampiarahina amin’ ny sakafo hafa misy prôteinina mba hahatomombana ny fitombon’ ny vatana.
Aretina sy bibikely mpanimba ny katsaka[hanova | hanova ny fango]
Maro ny bibikely sy ny kantsentitra manimba ny katsaka. Karazany maro ny holatra izay manimba ny fakan’ ny katsaka sy ny tahony ary ny babiny, izay miteraka fahalovany ka mampihena ny habe sy ny hatsaran’ ny voan-katsaka. Ireto ny aretina sasany vokatry ny holatra mahazo ny katsaka, dia ny aretina ateraky ny Fusarium roseum sy ny Helminthosporium turcicum, ary ny Ustilago zeae, izay miteraka zavatra fibontsinana amin’ ny babin-katsaka sy ny tahony ary ny voniny. Mihamainty izany rehefa antitra. Miteraka fihenan’ny vokatra izany. Misy koa aretina vokatry ny virosy izay manabotry ny katsaka. Afaka mifindra ireo aretina ireo. Misy koa ireo bibikely mihinana ny fakan’ ny katsaka.
Famokarana sy fampiasana ny katsaka[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ ny taona 1980 dia nitombo 40 % ny vokatra vokatry ny fampiasana zezika sy fanafody famonoana ahitra. Tamin’ ny fiandohan’ny taona 1990 dia nahatratra 469 tapitrisa tônina ny vokatra katsaka maneran-tany. I Etazonia no firenena mpamokatra katsaka betsaka indrindra eran-tany (miantoka ny 40 %n’ ny vokatra), ka ao amin’ ny faritra Middle West atao hoe Corn Belt no ivangongoan’ izany. Mamokatra katsaka betsaka koa i Sina, i Brezily, i Meksika ary i Frantsa.
Mbola ambangovangony amin'ny resaka Katsaka ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Katsaka&oldid=998755"
Voaova farany tamin'ny 8 Desambra 2020 amin'ny 10:28 ity pejy ity.